တရုတ် Panasonic က Smt စက်, Panasonic က Chip Mounter, Smt Panasonic ကစက်များထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:Panasonic က Smt စက်,Panasonic က Chip Mounter,Smt Panasonic ကစက်များ,Panasonic က Smt ပစ္စည်း,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Panasonic က Chip Mounter
Panasonic က Chip Mounter ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Panasonic က Smt စက်, Panasonic က Chip Mounter ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Smt Panasonic ကစက်များ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Panasonic က Chip Mounter CM402-L ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကနေရာထားရှိစက် NPM-W2  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Chip Mounter NPM-TT  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Chip Mounter CM602-L ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကနေရာထားရှိစက် NPM-W  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကနေရာထားရှိစက် NPM-D3  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Chip Mounter NPM-D ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
modular အမြင့်မြန်နှုန်းနေရာထားရှိစက် စက်မှုလုပ်ငန်း-0.06 s ကို / ချစ်ပ် (60,000 cph) တွင်•အမြင့်ဆုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအားအဆင့်ကို •လွယ်ကူစွာသုံးစွဲဖို့, ထိရောက်နှင့်အချိန်ကယ်တင် •အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့နိုင်စွမ်း အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Model ID...
အင်္ဂါရပ်များ ပုံနှိပ်ခြင်း, နေရာချထားခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေး သငျသညျထုတ်လုပ်ရန်အတွက် PCB ပေါ် မူတည်. သငျသညျအမြင့်မြန်နှုန်း mode ကိုသို့မဟုတ်မြင့်မားသော-တိကျမှန်ကန်မှု mode...
NPM-TT အမွှာဗန်းစည်းဝေးပွဲကိုပလက်ဖောင်း အီလက်ထရွန်းနစ်စည်းဝေးပွဲကိုလိုအပ်ချက်များကိုတိုးချဲ့နှင့်ဖြစ်ပေါ်နေသောများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် NPM ပလက်ဖောင်း 1.Introducing, အ NPM-TT (Next ကိုထုတ်လုပ်မှုရွေ့ပြောင်း-Twin Tray ထဲမှာ) Panasonic`s...
Panasonic က Chip Mounter CM602-L ကို အင်္ဂါရပ်များ & အကျိုးကျေးဇူးများ ထုတ်လုပ်မှုမဆိုကြင်နာဘို့တပလက်ဖောင်းဖြေရှင်းချက် ရှိပြီးသားပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူ Commons linear မော်တာ drive...
အင်္ဂါရပ်များ & အကျိုးကျေးဇူးများ စုစုပေါင်းအထိုင်လိုင်းများနှင့်အတူ 1.High ဧရိယာကုန်ထုတ်စွမ်းအား ပုံနှိပ်ခြင်း, နေရာချထားခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေး...
Panasonic က Chip Mounter NPM-D3 အင်္ဂါရပ်များ & အကျိုးကျေးဇူးများ စုစုပေါင်းအထိုင်လိုင်းများနှင့်အတူ 1. အမြင့်ဧရိယာကုန်ထုတ်စွမ်းအား နေရာချထားခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေး။ 2....
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Model ID NPM-D 16-nozzle head 12-nozzle head 8-nozzle head 2-nozzle head Dispensing head No head 16-nozzle head
တရုတ်နိုင်ငံ Panasonic က Chip Mounter ပေးသွင်း
Panasonic က Smt (မျက်နှာပြင်နည်းပညာကို mount), PTH (မှတစ်ဆင့်-ပေါက် pin ကို), နှင့် microelectronics နှငျ့ပတျသကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များမဆို-ရောနှော circuit ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏နောက်ကျော-အဆုံးထုပ်ပိုးများ၏ဒေသများရှိအလွန်အမင်းအားကိုးအီလက်ထရွန်းနစ်စည်းဝေးပွဲကိုပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျနော်တို့ chip ကို attach နှင့်လှန် axial နဲ့ radial သွင်း, Bond သေဆုံး, အသေခံရန်ဖွင့်, component တစ်ခုနေရာချထားခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် screen ကိုပရင်တာများနှင့်သာသနာကနေအထိပထမဦးဆုံးအတန်းအစားပစ္စည်းကိရိယာများကိုဆက်ကပ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများအများဆုံးခေတ်သစ်နည်းပညာများ၏ထုတ်လုပ်မှုကို enable လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှန်းကျင်ကိုအသုံးပြုသည်။
modular format နဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏ variable ကိုစက်တွေနည်းပညာများ၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးကိုထောကျပံ့များနှင့်ရုံတစျခုစက်၏ installation ကနေ 1000 ကျော်၏အသင်းတော်တို့အားအမှတဆင့်, ထိုကဲ့သို့သော, COB (ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ချစ်ပ်) အဖြစ်ဖြစ်စဉ်များဂရုစိုက်နိုငျသညျ, SOP (အထုပ်အပေါ် system ကို), epoxy, POP ကို ​​(အထုပ်ပေါ်မှာအထုပ်), 3D ထုပ်ပိုး, TS (thermo-Sonic) နှင့် TC (thermo-ချုံ့) အပြောင်းအလဲနဲ့, ပလာစမာ RIE မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး, ပလာစမာ ICP စွဲနှင့်ပါးလွှာန့်ကိုပလာစမာအန်စာတုံးပူးတွဲသေဆုံးလျက်ရှိသည်။ ထူးဆန်း-form ကိုနေရာချထားခြင်းနှင့် End-Of-line ကိုအလုပ်လုပ်ဆောင်စေရန်, ငါတို့သည်လည်းအလိုအလျောက်ကိရိယာများကိုဆက်ကပ်။
Panasonic က Smt စက် Panasonic က Chip Mounter Smt Panasonic ကစက်များ Panasonic က Smt ပစ္စည်း Panasonic က INSERT စက်